Khabiirka Caqli-yaqaanka ah ee Hubineysa inaad u baahantahay si aad u dhexgaliso AMP-ga Google ee Istaraatiijiyada Suuqgeynta - Taasina waa sababta
Boggaga Mobile Pages (AMP) waa mashruuca Google ee furan oo muujinaya abuurista moobiilo moobiil ah oo la taaban karo. Daabacayaashu waa ka-faa'iideystayaasha ugu muhiimsan mashruucan sababta oo ah waxay ujeeddadeedu tahay ujeeddada kor u qaadidda xawaaraha xawaaraha ee goobaha qalabka mobile. Waa xaqiiqo caalami ah oo xawaareynta xawaaraha waa qayb muhiim u ah matoorada raadinta, iyo waliba walaac aan macquul ahayn ee suuq-geynta internetka.
Ivan Konovalov, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu sharxayaa sida Google-ka AMP uu u saameeyo suuq-geynta onlineka.
Site ah oo ah AMP-wuxuu leeyahay laba faa'iido oo muhiim u ah SEO.
Marka hore, AMP waxay si toos ah u saameeyaa mid ka mid ah arrimaha ugu sarreeya ee Google ee isticmaala: moobilka mobile-ka ah ee la taaban karo. Dhab ahaantii, waxaa jira warar sheegaya in AMP laga yaabo in ay noqoto mid isir ah, laakiin taasi weli lama arag.
Iska-dhafidda moobiilka waa maanta oo ah dilal aad u liidata sababta oo ah inta badan ee booqdayaashaada internetka waxay isticmaalaan aaladaha mobile ka badan inta ay isticmaalaan miisaska. Laakiin waxaad ku doodi kartaa in AMP aysan ahayn habka kaliya ee looga dhigi karo naqshad mobile. Si kastaba ha ahaatee, xasuuso in aanad isticmaalin AMP waxay bixisaa tartamayaasha isticmaala AMP lugta.
Marka labaad, boggu wuxuu helayaa magac tilmaamaya "Fast" oo ku yaal bogga natiijooyinka raadinta (SERP). Marka akhristuhu sameeyo wax raadin wax kasta, Google wuxuu u jiidayaa xayawaan dhinaca sare ee SERP. Dajiskan waxaa ku jira waxyaabo laga helayo goobaha AMP-ka. Akhristaha ayaa markaa si sahlan u riixaya mid ka mid ah maqaalada.
Tani waxay u tarjumeysaa aragtida bogga, aragti ra'yi iyo wadaag, iyo ugu dambeyntii waxay hagaajineysaa xiriirka / akhristaha. Aragtida kordhay ee xayeysiisku waxay leedahay saameynahan soo socda ee suuqgeynta internetka:
Sicirada riixitaanka ee sareeya:
Mawduucda lagu soo bandhigo duufaanta waxay leedahay aragti aad u sarreeya iyo suurta galka akhriyaha oo loo soo gudbiyo bogga intarnetka. Tani waxay ka dhigan tahay kala badhka dagaalka ee booqdayaasha goobtaaga horeba waa lagu guuleystay.
Awoodda caanka ah ee kordhay:
Akhristayaasha waxaa lagu riyaaqay waxyaabo ay ka mid yihiin duufaanta, maadaama ay u maleynayaan inay tahay tayada sare (sababta kale ee Google looga dhigayo bogga inteeda badan?)
Qiimaha dheeraadka ah ee lagu riixo iyo korodhka calaamadaha kumbuyuutarku waxay keenaan qiime sare oo riixaya. Maadaama barta AMP-ku leedahay muuqaalo badan oo u muuqata mid la aamini karo marka loo eego kuwa aan AMP ahayn, akhristayaashu waxay u badan tahay inay gujiyaan xayeysiinta.
Waayo-aragnimo user advanced:
Waayo-aragnimada qofku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay guusha ama guul-darrida ku-saleysan suuq-geynta onlineka. Dadka isticmaala internetka iyaga oo isticmaalaya qalabka mobile waxay jecel yihin goobo si tartiib tartiib ah u cunaya ama u cunaan xogtooda. Cilmi baaris ayaa muujisay in dadka booqdayaasha ah aysan sugi karin wax ka badan dhowr ilbidhiqsi oo loogu talagalay goob si ay u buuxiso.
AMP waxay hoos u dhigeysaa wakhtiga rarista illaa nuska labaad, taas oo ah afar jeer ka dhakhso badan xawaaraha rukunka ee aan AMP ahayn. Waxay sidoo kale u saamaxaysaa dadka isticmaala inay eegaan nuxurka iyada oo aan la booqan goobta (iyada oo loo marayo carousel). Isticmaal kaliya ayaa booqda goobta dhabta ah haddii uu / uu jecel yahay waxa lagu soo bandhigay xayawaanka. Tani waxay u sahlaysaa isticmaalka inuu kaydiyo xogta moobiilka iyo nolosha batteriga.
Dabcan, AMP maahan wax saameyn ah oo xun oo ku saabsan suuq-geynta internetka. Kuma shaqeyneyso goobaha aan daabacanayn. Sidoo kale, CMS-da taageera AMP ayaa loo baahan yahay, taas oo macnaheedu noqon karo miisaaniyadda kordhaysa. Ugu dambeyntii, ma jiraan wax foomam ah AMP content, taasoo macnaheedu yahay inaadan abuuri karin hogaamiyaasha rasmiga ah. Dhibaatadani waxaa lagu xallin karaa casriyeeye u oggolaanaya daabacayaasha inay isticmaalaan foomamka AMP-ku-habboon ee ku jira mawduucooda, wax laga yaabo inay Google ka shaqayn karto.
AMP waa arrin xasaasi ah oo ku saabsan suuq-geynta online-ka maanta waxayna u muuqataa in ay ku guulaysteen wakhti kasta. Waa wax caqli-gal ah in la tixgeliyo sida loo dhexgeliyo istaraatiijiyadaada, halkii aad ka qoomameysay ka dib markii aanad u isticmaalin inta ay dhamaan tartamayaashu sameeyeen Source .